MP4 Player for Mac - Sida loo Play MP4 on Mac (Mavericks ka mid ah)
Maqaalkani waxa uu barayaa doonaa 3 sare ciyaartoyda MP4 for Mac , kuwaas oo gebi ahaanba bilaash ah si aad u ciyaari karaa MP4 video on Mac. Looma baahna in la badalo, Just ciyaari MP4 on Mac lacag la'aan ah. Ciyaartoydan MP4 lacag la'aan ah Mac taageeraan Snow Leopard OS. Ma jiro wax dhibaato ah u ciyaaro MP4 on Snow Leopard. Haddii ciyaaryahan MP4 ma ka shaqeeyaa, oo kaliya loogu badalo MP4 in MOV , taas oo inta badan playable on Mac la ciyaaryahan kasta warbaahinta.
Download Videos ka 1000+ websites video qaybsiga, sida vimeo, Dailymotion, iwm
Taageerada degsado files audio si toos ah Firefox, Chrome iyo IE
Tayadoodii videos for: iMovie, Lugood, iPhone, Apple TV oo dheeraad ah
A dhisay-in Player kuu ogolaanaya in aad ku raaxaysan FLV, MP4, WebM videos cozily
Download MP4 ciyaartoyda Bilaashka ah ee Mac OS X 10.6 Snow Leopard
QuickTime waa qaabka multimedia ah ee ay soo Apple Inc., oo awood u leh wax ka qabashada qaababka kala duwan ee video digital (MP4, MOV), clips warbaahinta, dhawaaqa, qoraalka, animation, music, iyo sanamyadii falgal dusha. Version ugu dambeeyay waa QuickTime X (10.0) oo waxa kaliya ee laga heli karaa Mac OS X Leopard Snow v10.6.
Ciyaaryahanka VLC taageeraa oo dhan video iyo durdurrada audio ka mid yihiin MP4. Waxaad u baahan tahay oo aan si loo soo dajiyo kasta oo codecs ama sida diirada u ciyaaro .mp4 files.
Plex (aka Plexapp), waa warbaahin xarun u furan Intel ku salaysan kombiyuutarada Apple Macintosh, waxa ay leedahay design ah user interface 10-foot ah ee ku nool TV-qolka.
Qaabab weelka ay taageerayaan, AVI, MPEG, wmv, ASF, FLV, MKV, MOV, MP4, M4A, AAC, lowska, Ogg, OGM, RealMedia RAM / dhexena / RV / RA / RMVB, 3gp, cancer, PVA, NUV, NSV , NSA, FLI, FLC, iyo DVR-MS (taageero beta).
Waa maxay MP4?
The MP4 qaab file qeexayaa kaydinta MPEG-4 audio, goobaha iyo content multimedia adeegsanaya qaabkan soo File ISO Base Media. The Qaabka File AVC qeexayaa lagu kaydiyo Video Sare ee sireed (ISO / IEC 14496-10 / AVC) xogta heerka files of qoyska Qaabka File ISO Base Media gudahood. Kala duwan oo ka mid ah qaabab Mpg / MPEG la mid ah, qaab MP4 video gaaro dheellitir u wanaagsan oo u dhexeeya tayada video iyo size file, taas oo ka dhigaysa MP4 la isticmaalo kombiyuutarka iyo qalabka la qaadi karo.
Waa maxay sababta uusan ciyaari karo MP4 video files?
Waxaad u baahan tahay codec u dhiganta ciyaari MP4 on Mac. Marka ciyaaryahan warbaahinta aysan ka ciyaari kara .mp4 videos, waxay ka dhigan tahay in ciyaaryahanka uusan ka heli kartaa decoder ku haboon faylka. Markaas ciyaaryahanka ay isku dayi karaan in ay soo bixi codec ku habboon in ay dib ugu ciyaaro faylka. Si kastaba ha ahaatee, haddii hoobiyay Camalkoodii, waxaad u baahan doontaa si loo soo dajiyo ciyaaryahan kale MP4 inuu u ciyaaro aad videos, ama badalo MP4 in qaab kale oo video, sida MOV.
Hel Converter ah MP4 xor ah oo aan Watermark
Dhibaatooyinka Mac OS X Yosemite
Download YouTube Best by Downloader Click for Mac
Best MP3 Gantaal u Mac - badbaadi YouTube Video kasta in MP3
> Resource > Mac > Sida loo Play Videos MP4 on Mac OS X (Yosemite ka mid ah)